September 2021 - ShwengweGames
ဆီဈေးတွေအဆမတန်မြင့်တက်နေချိန်မှာ ကားကိုဘယ်လိုမောင်းရမလဲဆိုတာ ပြောပြလာတဲ့ သရုပ်ဆောင်ကျော်ကျော်
September 30, 2021 by Shwengwe Games
ရွှေပိုးအိမ် ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ ဇာတ်ကားတွေကိုဆိုရင်လည်း ပရိသတ်တွေက အားပေးကြည့်ရှုကြပြီး သူမရဲ့ ပိုင်နိုင်တိကျတဲ့ သရုပ်ဆောင်တွေကြောင့် ပရိသတ်ကြီးက ဇာတ်ကားထဲ စီးမျောပါသွားရပါတယ်နော်။ရွှေပိုးအိမ်က ပြည့်ပြည့်ဖောင်းဖောင်းလေး နဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ပုံလေးကြောင့် လူချစ်လူခင်ပေါများကာပရိသတ်တွေ ချစ်ခင်ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ကောင်းမှု ကုသိုလ်နဲ့ အလှူအတန်းတွေကိုလည်း အမြဲ ပြုလုပ်လေ့ရှိရာ အခုလည်း ဆံတော်ရှင်ကျိုက်ထီးရိုးစေတီတော်မြတ်ကို သွားရောက်ဖူးမြှော်ရင်း (၇) ရက်သားသမီး ပြည်သူများအတွက် ဆုတောင်းပေးခြင်းတွေ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ် ။
” ဆံတော်ရှင်ကျိုက်ထီးရိုးစေတီတော်မြတ်ကို သွားရောက်ဖူးမြှော်ရင်း အားလုံးကိုယ်စား ဆုတောင်းပေးခဲ့ပါတယ်ရှင် မြန်မာပြည်ကြီး အမြန်ဆုံးအေးချမ်းပါစေ ( ၇)ရက်သားသမီးများအားလုံး စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းနှင့်ပြည့်စုံကြပါစေ Covid 19 ရောဂါဆိုးကြီးမှ လွတ်မြောက်ကြပါစေ စီးပွါးတွေ ဒီရေအလားတိုးတက်ကြပါစေ ” ရေးသားထားရာ ပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ် ။Credit – Cele Zone,Photo – Shwe Poe Eain
ပရိသတ်ကြီးရေ အေးမြဖြူကတော့ ငယ်စဉ်က တည်းက သီချင်းဆိုရာမှာပါရမီပါပြီး လက်ရှိမှာ အဆိုတော်တစ်ယောက်အနေနဲ့ ရပ်တည်းနိုင်အောင်ကြိုးစားနေပါတယ်။ အေးမြဖြူလေးကတော့ ပရိသတ်အခိုင်အမာလည်း ရရှိထားပြီး ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေး ချစ်ခင်မှုကိုလည်း အပြည့်အဝရရှိထားပါတယ်။
Photo credit MC
မိုးသိုလေးကတော့ သူရဲ့ ပရိသတ်တွေကို အမြဲတမ်းလိုလို တရင်းတနှီးနဲ့ ဆက်ဆံလေ့ရှိပြီး ပရိသတ်တွေကိုလည်း အမြဲလိုလို သီချင်းတွေသီဆိုပြလေ့ရှိပါတယ်။ အခုလို ကပ်ဘေးတွေကြောင့် ပရိသတ်တွေ စိတ်ညစ်နေချိန်မှာ စိတ်အပန်းပြေစရ ာတစ်ခုအနေနဲ့ သီချင်းလေးတစ်ပုဒ်ကို Cover Song အနေနဲ့ ပြန်လည်သီဆိုခဲ့ပါတယ်။ သီချင်းလေးကတော့ လတ်တလော ခေတ်စားနေတဲ့ Hometown Cha Cha Cha Series ထဲက OST Song လေးကို ကိုယ်ပိုင်ဟန်လေးနဲ့ ပြန်လည်သီဆိုပြခဲ့တာပါ။
မိုးသိုလေးကတော့ သူ့ရဲ့အမာခံပရိသတ်တွေဖြစ်တဲ့ မိုးစက်လေးတွေကို လွမ်းနေတာရယ် သီချင်းတွေမဆိုပြရတာကြာပြီဖြစ်တဲ့ အတွက် စိတ်ညစ်နေတာတွေကြာကနေ စိတ်အပန်းပြေစေဖို့ ရည်ရွယ်ပြီး သီဆိုပြခဲ့တာပါတဲ့။ ပရိသတ်ကြီးတွေထဲက မိုးသိုလေးရဲ့ ပရိသတ်တွေအတွက် ဗီဒီယိုလေးကို ပြန်လည်မျှဝေဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
ပရိသတ္ႀကီးေရ ေအးျမျဖဴကေတာ့ ငယ္စဥ္က တည္းက သီခ်င္းဆိုရာမွာပါရမီပါၿပီး လက္႐ွိမွာ အဆိုေတာ္တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ရပ္တည္းႏိုင္ေအာင္ႀကိဳးစားေနပါတယ္။ ေအးျမျဖဴေလးကေတာ့ ပရိသတ္အခိုင္အမာလည္း ရ႐ွိထားၿပီး ပရိသတ္ေတြရဲ႕ အားေပး ခ်စ္ခင္မႈကိုလည္း အျပည့္အဝရ႐ွိထားပါတယ္။
မိုးသိုေလးကေတာ့ သူရဲ႕ ပရိသတ္ေတြကို အၿမဲတမ္းလိုလို တရင္းတႏွီးနဲ႔ ဆက္ဆံေလ့႐ွိၿပီး ပရိသတ္ေတြကိုလည္း အၿမဲလိုလို သီခ်င္းေတြသီဆိုျပေလ့႐ွိပါတယ္။ အခုလို ကပ္ေဘးေတြေၾကာင့္ ပရိသတ္ေတြ စိတ္ညစ္ေနခ်ိန္မွာ စိတ္အပန္းေျပစရ ာတစ္ခုအေနနဲ႔ သီခ်င္းေလးတစ္ပုဒ္ကို Cover Song အေနနဲ႔ ျပန္လည္သီဆိုခဲ့ပါတယ္။ သီခ်င္းေလးကေတာ့ လတ္တေလာ ေခတ္စားေနတဲ့ Hometown Cha Cha Cha Series ထဲက OST Song ေလးကို ကိုယ္ပိုင္ဟန္ေလးနဲ႔ ျပန္လည္သီဆိုျပခဲ့တာပါ။
မိုးသိုေလးကေတာ့ သူ႕ရဲ႕အမာခံပရိသတ္ေတြျဖစ္တဲ့ မိုးစက္ေလးေတြကို လြမ္းေနတာရယ္ သီခ်င္းေတြမဆိုျပရတာၾကာၿပီျဖစ္တဲ့ အတြက္ စိတ္ညစ္ေနတာေတြၾကာကေန စိတ္အပန္းေျပေစဖို႔ ရည္႐ြယ္ၿပီး သီဆိုျပခဲ့တာပါတဲ့။ ပရိသတ္ႀကီးေတြထဲက မိုးသိုေလးရဲ႕ ပရိသတ္ေတြအတြက္ ဗီဒီယိုေလးကို ျပန္လည္မွ်ေဝေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။
အိမ်တစ်အိမ်တွင် ဘုန်းကံနိမ့် လာဘ်ပိတ်စေတတ်သော အလေ့အကျင့်ဆိုး (၁၉) ခု ကို ဗဟုသုတဖြစ်စေဖို့ ပြန်လည်မျှဝေဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
၁။ ဘုရားခန်းထဲတွင် လင်မယား နှစ်ယောက် မအိပ်ရ
၂။ ယောင်္ကျား၏ ညာဘက်တွင် မိန်းမ မအိပ်ရ
၃။ နံနက် ၄ ခွဲမှ ၆ နာရီ အတွင်းတွင် သာသနာစောင့်နတ် နတ်မင်းကြီး လေးပါးသည် လူအများ၏ ကောင်းမှု မကောင်းမှုကိုကြည့်ရှုသောအချိန် ဖြစ် သည်။ထိုအချိန်တွင် မေထုန်မှီဝဲမှုကို အ ထူးရှောင်ကြဉ် ရမည်။
၄။ မိမိအိပ်သောခုတင်ထက် သို့မဟုတ် အိပ်ရာထက်မြင့်သော နေရာတွင် ထဘီတန်းမပြုလုပ်ရ။ သား သမီး ခေါင်းရင်း မိဘခြေရင်းတွင် မနေရ မအိပ်ရ
၅။ မိမိ အိပ်ရာခင်းနှင့် ပုဆိုးစောင်များကို မိမိအိပ်သော ခေါင်းအုံးပေါ်တွင် တင်၍မထားရ
၆။ မိမိ နေထိုင်ရာထက် မြင့်သော နေရာတွင်ဖျာ မွေ့ရာ စောင်များ လှမ်းခြင်းမပြုလုပ်ရ
၇။ မိမိ အိမ်ရှေ့ အပေါက်ဝတွင် မေးကို လက်ထောက်ပြီး မထိုင်ရ မမှိုင်ရ
၈။ မိမိ အိမ်ရှေ့ တံခါး အပေါက်ဝတွင် ဆံပင်ဖားရားချ၍ သန်းဥ မဆွဲရ
၉။ မိမိ အိမ်ရှေ့ တံခါးပေါက်ဝတွင် ကလေးများ မစင်မစွန့်ရ
၁၀။ နံနက် အိပ်ယာထ မင်္ဂလာယူသော အချိန်၌ အော်ဟစ်ဆဲရေး တိုင်းထွာခြင်း မလုပ်ရ
၁၁။ နံနက် စောစော အိပ်ရာထ မျက်နှာ သစ်ရာတွင် လည်ချောင်းထဲမှ သလိပ်များကို မရ ရအောင် အသံကျယ်လောင်စွာပြု၍ အော့…. အော့…. အော့ ဟု မလုပ်ရ
၁၂။ ကျွဲခတ်သော အဝတ် မီးလောင်ထားပြီးသောအဝတ် လေပွေဖြင့် လွင့်ပါလာသောအဝတ် ကြွက်ကိုက်ထားသော အ ဝတ် ၎င်းအဝတ်များကို လူတို့ မဝတ်ကောင်း
၁၃။ အိမ်ပေါ်တွင် လမ်းလျှောက်လျှင် ခြေသံပြင်းပြင်း မလျှောက်ရ အိုးခွက် ပန်းကန် ပစ္စည်းများကို အသံမြည်အောင် ကြမ်းတမ်းစွာ မပြုလုပ်ရ
၁၄။ ထမင်းစားလျှင် ထမင်းပန်းကန်များကို လှည့်၍ လှုပ်၍ မစားရ ငြိမ်သက်စွာ ညီညာစွာ ထားပြီးမှ စားရမည် ထမင်းစားခုံကို လက်ထောက်၍ မစားရ
၁၅။ ထမင်းစား၍သော် လည်းကောင်း အခြားအစားစာများ စား၍သော် လည်း ကောင်း စားရာတွင် ပါးစပ်မှ ပလပ် ပလပ် မည်အောင် ခွေးများ ထမင်းရည် သောက်သကဲ့သို့ အသံမမြည်စေရ
၁၆။ လမ်းလျှောက်စဉ် ထမင်းနှင့် အခြား စားသောက်ဖွယ်ရာများကို မစားရ
၁၇။ မိမိအိမ်ရှေ့ အပေါက်ဝကို ကျော ခိုင်းပြီး မထိုင်ရ
၁၈။ နံနက် စောစောနှင့် ညဘက်များတွင် လက်ဆစ် ခြေဆစ် များ မချိုးရ
၁၉။ နံနက်စောစော နှင့် ညဘက်တွင် လေမချွန်ရ။
မိမိသိသော အရာလေးများကို ဝေမျှလိုက်ပါတယ်။
Khun soe paing
မင်းသားချောနေဒွေးကတော့အနုပညာအလုပ်တွေကိုလုပ်ကိုင်ရင်းနဲ့သူ့ရဲ့ကိုယ် ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုလည်းလုပ်ကိုင်နေတာ ပရိသတ်တွေသိရှိပြီးသားဖြစ်မှာပါနော်။နေဒွေးကသူ့ရဲ့ကိုယ် ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလေးဖြစ်တဲ့ ကျန်းမာရေးဆန်အရောင်းအဝယ်လုပ်ငန်းလေးက လက်ရှိမှာဆို တော်တော်လေးကို အောင်မြင်နေခဲ့ပါပြီ။
ဒါ့အပြင် အလှူအတန်းနဲ့ ပတ်သက်လာရင်လည်းလက်မနှေးတဲ့နေဒွေးကနေ့စဉ်တိုင်းလိုလို လိုအပ်တဲ့နေရာများကို သွား ရောက်ကာသူကိုယ်တိုင်ရောင်းချလျက်ရှိနေတဲ့ဆန်များကိုလှူဒါန်းခဲ့သလို မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများနဲ့လည်း စုပေါင်းကာ အလှူငွေများ ၊လိုအပ်တဲ့ အစား အသောက်များကိုလှူဒါန်းလျက်ရှိတာကို လေးစားစွာတွေ့မြင်ရပါတယ်။
အခုလည်း ချစ်ရတဲ့ မေမေနဲ့ အတူ မိုးမခရေလည် မိဘမဲ့ပရဟိတကျောင်းတိုက် မှာအလှူအတန်းများစွာ ပြုလုပ်ခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဆန်များနဲ့ အလှူငွေများကိုကိုယ်တိုင်ကပ်လှူခဲ့တဲ့ ပုံရိပ်တွေကိုလည်းဝေမျှထားပါတယ်။နေဒွေးကတော့အရင်ရက်ပိုင်းတွေကလည်းခက်ခဲနေတဲ့အိမ်ထောင်စုတွေဆီကိုသွား ရောက်ကာစားသောက်ကုန်များလှူဒါန်းခဲ့ပါသေးတယ်။ပရိသတ်ကြီးအတွက်နေဒွေးရဲ့အလှူပုံရိပ်တွေကိုဝေမျှပေးရင်းဒီထက်မကလှူနိုင်ပါစေဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ် ။
အမေရိကန်နိုင်ငံ NBC Channel မှာထုတ်လွှင့်ပြသသွားမယ့် တီဗီစီးရီးတွင် ပါဝင်သရုပ်ဆောင် မည့်တစ်ခေတ်တစ်ခါက အောင်မြင်ကျော်ကြားခဲ့တဲ့ မင်းသမီးကြီး မေဝင်းမောင်
တစ်ခေတ်တစ်ခါက အောင်မြင်ကျော်ကြားခဲ့တဲ့ မင်းသမီးကြီး မေဝင်းမောင်ဟာ အနုပညာလုပ်ငန်းများကို ရပ်တန့်ထားခဲ့တာ အတော်ကြာနေပါပြီ။ ဒါပေမယ့် စက်တင်ဘာ ၂၉ရက်နေ့ကပဲ မင်းသမီးကြီးမေဝင်းမောင်ဟာ သူမရဲ့ ဖေ့ဘုတ်စာမျက်နှာထက်ကနေ ပရိသတ်တွေကို အခုလို အသိပေးလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
” နှစ်ပေါင်းသုံးဆယ်လောက်အတွင်းမှာ လုံးဝနီးပါးခေါက်ထားခဲ့ရတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့အနုပညာနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုအတွက် ပါဝင်ဖို့ အခွင့်အရေးတစ်ခုပေါ်လာခဲ့ပါတယ်” လို့ဆိုထားပါတယ်။မင်းသမီးကြီး မေဝင်းမောင်ဟာ သူမတစ်ယောက်တည်း သူစိမ်းစစ်စစ်မဟုတ်ဘဲ သူစိမ်းတို့အလည် နယူးယောက်မြို့ ကို ချီတက်လာခဲ့ပါတယ်” လို့ရေးထားပါတယ်။ သူမဟာ အမေရိကန်နိုင်ငံ NBC Channel မှာထုတ်လွှင့်မယ့် တီဗီစီးရီးတစ်ခုတွင် မြန်မာအမျိုးသမီးတစ်ဦး သရုပ်ဆောင် လိုတာကြောင့် Zoom မှတစ်ဆင့် Audition လုပ်ဖြစ်ခဲ့ပြီး ရွေးချယ်ခံရာမှ နယူးယောက်မြို့မှာ ရိုက်ကူးရေးလုပ်ဖို့အတွက် သွားရောက်ခဲ့တာပါ။
ထိုစီးရီးထဲတွင် မင်းသမီးကြီး မေဝင်းမောင်ဟာ “ဟေမာတံခွန်” အမည်ရတဲ့ မြန်မာအမျိုးသမီးကြီးအနေနဲ့ ဧည့်သည့်သရုပ်ဆောင်ပါဝင်သွားမှာပါ။ မင်းသမီးကြီး မေဝင်းမောင်ရဲ့ ပြောကြားချက်အရဆို ထိုစီးရီးထဲတွင် မြန်မာလူမျိုးနောက်ထပ် နှစ်ယောက်နဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့ရပြီး တွဲဖက်သရုပ်ဆာင်ခဲ့ရတယ်လို့ သိရပါတယ်။
မင်းသမီးကြီး မေဝင်မောင်းပါဝင်တဲ့ အမေရိကန်တီဗီစီးရီးဟာ နယူးအမ်စတာဒမ်မြို့ ဆေးရုံတစ်ရုံပေါ်က အဖြစ်အပျက်တွေကိုရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားတဲ့ စီးရီးတစ်ခုဖြစ် တယ်လို့ ပြောထားပါတယ်။ မင်းသမီးကြီးမေဝင်းမောင်ဟာ ဟေမာခေါ် “Miss Takhon” အဖြစ် သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး မြန်မာသရုပ်ဆောင်တစ်ဦးကတော့ ဟေမာရဲ့မြေးမလေးအဖြစ် သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်တစ်ဦးကတော့ မြန်မာသံရုံးက အမှုထမ်း တစ်ယောက်အနေနဲ့ သရုပ်ဆောင်ရပါတယ်လို့ မြန်မာလူမျိုးသုံးဦးရဲ့ ဇာတ်ကောင်တွေကို ပြောပြထားပါသေးတယ်။
တီဗီစီးရီးထဲတွင် အဓိကပါဝင်သရုပ်ဆောင်သူကတော့ ရိုင်ယန်အက်ဂိုး ဖြစ်ကြောင်း မင်းသမီးကြီးမေဝင်းမောင်က မိတ်ဆက်ပေးထားပါသေးတယ်။ “Blacklist ကို ကြည့်ဖူးရင်သူ့ကို သိပါလိမ့်မယ်” လို့ ဆိုပါတယ်။မင်းသမီးကြီးမေဝင်းမောင်ဟာ New Amsterdam Season4ရဲ့ အပိုင်း၅ “This Be The Verse” မှာပါဝင်သွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။ “အပိုင်း၅က အောက်တိုဘာလထဲမှာလွှင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကြားထဲမှာ ဘာအကြောင်းကြောင့်မှ အပြောင်းအလဲမရှိဘဲ အစီအစဉ်အတိုင်းပြရင် အောက်တိုဘာ ၁၉မှာ ဖြစ်ပါမယ်” လို့ အသိပေးထားပါသေးတယ်။
မင်းသမီးကြီးမေဝင်းမောင်ကတော့ သူမရဲ့ ပရိသတ်တွေကို “မြင်နေကျ မေဝင်းမောင် နဲ့တော့ တူမှာမဟုတ်ပါ နှစ်သက်နိုင်ကြပါစေ” လို့ ဆုတောင်းစကားပြောထားပါတယ်။
တစ္ေခတ္တစ္ခါက ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားခဲ့တဲ့ မင္းသမီးႀကီး ေမဝင္းေမာင္ဟာ အႏုပညာလုပ္ငန္းမ်ားကို ရပ္တန္႔ထားခဲ့တာ အေတာ္ၾကာေနပါၿပီ။ ဒါေပမယ့္ စက္တင္ဘာ ၂၉ရက္ေန႔ကပဲ မင္းသမီးႀကီးေမဝင္းေမာင္ဟာ သူမရဲ႕ ေဖ့ဘုတ္စာမ်က္ႏွာထက္ကေန ပရိသတ္ေတြကို အခုလို အသိေပးလာတာပဲျဖစ္ပါတယ္။
” ႏွစ္ေပါင္းသုံးဆယ္ေလာက္အတြင္းမွာ လုံးဝနီးပါးေခါက္ထားခဲ့ရတဲ့ ကိုယ့္ရဲ႕အႏုပညာနဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီး လႈပ္႐ွားမႈတစ္ခုအတြက္ ပါဝင္ဖို႔ အခြင့္အေရးတစ္ခုေပၚလာခဲ့ပါတယ္” လို႔ဆိုထားပါတယ္။မင္းသမီးႀကီး ေမဝင္းေမာင္ဟာ သူမတစ္ေယာက္တည္း သူစိမ္းစစ္စစ္မဟုတ္ဘဲ သူစိမ္းတို႔အလည္ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ ကို ခ်ီတက္လာခဲ့ပါတယ္” လို႔ေရးထားပါတယ္။ သူမဟာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ NBC Channel မွာထုတ္လႊင့္မယ့္ တီဗီစီးရီးတစ္ခုတြင္ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး သ႐ုပ္ေဆာင္ လိုတာေၾကာင့္ Zoom မွတစ္ဆင့္ Audition လုပ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ေ႐ြးခ်ယ္ခံရာမွ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕မွာ ႐ိုက္ကူးေရးလုပ္ဖို႔အတြက္ သြားေရာက္ခဲ့တာပါ။
ထိုစီးရီးထဲတြင္ မင္းသမီးႀကီး ေမဝင္းေမာင္ဟာ “ေဟမာတံခြန္” အမည္ရတဲ့ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးႀကီးအေနနဲ႔ ဧည့္သည့္သ႐ုပ္ေဆာင္ပါဝင္သြားမွာပါ။ မင္းသမီးႀကီး ေမဝင္းေမာင္ရဲ႕ ေျပာၾကားခ်က္အရဆို ထိုစီးရီးထဲတြင္ ျမန္မာလူမ်ိဳးေနာက္ထပ္ ႏွစ္ေယာက္နဲ႔ ေတြ႕ဆုံခဲ့ရၿပီး တြဲဖက္သ႐ုပ္ဆာင္ခဲ့ရတယ္လို႔ သိရပါတယ္။
မင္းသမီးႀကီး ေမဝင္ေမာင္းပါဝင္တဲ့ အေမရိကန္တီဗီစီးရီးဟာ နယူးအမ္စတာဒမ္ၿမိဳ႕ ေဆး႐ုံတစ္႐ုံေပၚက အျဖစ္အပ်က္ေတြကို႐ိုက္ကူးတင္ဆက္ထားတဲ့ စီးရီးတစ္ခုျဖစ္ တယ္လို႔ ေျပာထားပါတယ္။ မင္းသမီးႀကီးေမဝင္းေမာင္ဟာ ေဟမာေခၚ “Miss Takhon” အျဖစ္ သ႐ုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာသ႐ုပ္ေဆာင္တစ္ဦးကေတာ့ ေဟမာရဲ႕ေျမးမေလးအျဖစ္ သ႐ုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ဦးကေတာ့ ျမန္မာသံ႐ုံးက အမႈထမ္း တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ သ႐ုပ္ေဆာင္ရပါတယ္လို႔ ျမန္မာလူမ်ိဳးသုံးဦးရဲ႕ ဇာတ္ေကာင္ေတြကို ေျပာျပထားပါေသးတယ္။
တီဗီစီးရီးထဲတြင္ အဓိကပါဝင္သ႐ုပ္ေဆာင္သူကေတာ့ ႐ိုင္ယန္အက္ဂိုး ျဖစ္ေၾကာင္း မင္းသမီးႀကီးေမဝင္းေမာင္က မိတ္ဆက္ေပးထားပါေသးတယ္။ “Blacklist ကို ၾကည့္ဖူးရင္သူ႕ကို သိပါလိမ့္မယ္” လို႔ ဆိုပါတယ္။မင္းသမီးႀကီးေမဝင္းေမာင္ဟာ New Amsterdam Season4ရဲ႕ အပိုင္း၅ “This Be The Verse” မွာပါဝင္သြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။ “အပိုင္း၅က ေအာက္တိုဘာလထဲမွာလႊင့္မွာျဖစ္ပါတယ္။ၾကားထဲမွာ ဘာအေၾကာင္းေၾကာင့္မွ အေျပာင္းအလဲမ႐ွိဘဲ အစီအစဥ္အတိုင္းျပရင္ ေအာက္တိုဘာ ၁၉မွာ ျဖစ္ပါမယ္” လို႔ အသိေပးထားပါေသးတယ္။
မင္းသမီးႀကီးေမဝင္းေမာင္ကေတာ့ သူမရဲ႕ ပရိသတ္ေတြကို “ျမင္ေနက် ေမဝင္းေမာင္ နဲ႔ေတာ့ တူမွာမဟုတ္ပါ ႏွစ္သက္ႏိုင္ၾကပါေစ” လို႔ ဆုေတာင္းစကားေျပာထားပါတယ္။
ဖခင်ကြီးကွယ်လွန်တာ ၂လပြည့်လေးမှာ အရမ်းလွမ်းနေတဲ့အကြောင်း ၀မ်းနည်းစွာရင်ဖွင့်ပြောပြလာတဲ့ သရုပ်ဆောင်ညီနန္ဒ
ရိုနယ်ဒို နှင့် ဂျော်ဂျီနာ တို့ကို လက်မထပ်စေချင်တဲ့ မိခင်ဖြစ်သူ Dolores Aveiro
မန်ယူစတား ရိုနယ်ဒိုရဲ့ မိခင်ဖြစ်သူ Dolores Aveiro ဟာ ရိုနယ်ဒို ကို လက်ရှိတွဲနေတဲ့ အာဂျင်တိုင်းသူ ဂျော်ဂျီနာ နှင့် လက်ထပ်စေချင်တဲ့ပုံမရပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆို သူမက ဂျော်ဂျီနာကို ရိုနယ်ဒိုနဲ့တွဲ နေတာဟာ စီပွားရေးအရ တွဲနေတယ်လို့ယုံကြည်နေတာဖြစ်ပါတယ်။
ရိုနယ်ဒိုကတော့ ဂျော်ဂျီနာနှင့်တွဲနေတာကိုသဘောကျပြီးပျော်ရွှင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ မန်ချက်စတာမြို့မှာ ရိုနယ်ဒိုရဲ့ သား၃ယောက် ဂျော်ဂျီနာနှင့် ရထားတဲ့သမီတစ်ဉီး တို့နှင့် ပျော်ရွှင်စရာ မိသားစုလေးအဖြစ်နေထိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။
သတင်းတစ်ပုဒ်အဆိုအရ အမှန်တစ်ကယ်တော့ ဂျော်ဂျီနာက ရိုနယ်ဒို နှင့် လက်ထပ်ရန်အတွက် ရည်ရွယ်နေပြီး ရိုနယ်ဒို ထံမှ လက်ထပ်ခွင့်တောင်းခံမှုကိုစောင့်ဆိုင်းနေတာပါ။သို့သော် ရိုနယ်ဒို ရဲ့ မိသားစုက ဟန့်တားနေခဲ့လို့ လက်ထပ်ဖို့ ကြန့်ကြနေတာဖြစ်ပါတယ်။
ရိုနယ်ဒိုရဲ့ မိခင်ဖြစ်သူ Dolores Aveiro ဟာ သူတို့အတွဲကိုလက်ထပ်ရန်မလိုလားဘူး၊ ဂျော်ဂျီနာက သူ့သားရဲ့ စီးပွားရေးကို မက်မော တယ်လို့ ရိုနယ်ဒိုနဲ့ နီးစပ်တဲ့ အသိုင်အဝိုင်းက ပြောပါတယ်ဟု မီဒီယာများမှာ ဖော်ထုတ် ရေးသား ကြပါတယ်။ သူမရဲ့ အခြားသာသမီးတွေ ကလည်း သူမလိုပဲ ထင်ကြတာပါ။ ဒါကြောင့် မင်္ဂလာပွဲအတွက်ကတော့ ရိုနယ်ဒိုရဲ့မိသားစု အတွင်းမှာ ဆန့်ကျင်ဘက် အယူအဆတွေ ပြင်းထန်နေ ဆဲပဲဖြစ်ပါတယ်။
သို့သော်လည်း မကြာသေးမီက ရိုနယ်ဒိုရဲ့ မိခင်က ဂျော်ဂျီနာကို အကောင်းမြင်လာပြီး ရိုနယ်ဒို ကို support လုပ်ပေးတဲ့အတွက် ဂျော်ဂျီနာ ကိုချီးမွမ်းစကားပြောခဲ့ပါသေးတယ်။ ရိုနယ်ဒို ဟာ သူ့မိခင်ရဲ့ဆန္ဒကို လိုက်လျောမလား ဆန့်ကျင်မလားဆို တာကတော့ အချိန်တန်ရင်တော့သိလာရမှာပါ။
႐ိုနယ္ဒို ႏွင့္ ေဂ်ာ္ဂ်ီနာ တို႔ကို လက္မထပ္ေစခ်င္တဲ့ မိခင္ျဖစ္သူ Dolores Aveiro
မန္ယူစတား ႐ိုနယ္ဒိုရဲ႕ မိခင္ျဖစ္သူ Dolores Aveiro ဟာ ႐ိုနယ္ဒို ကို လက္႐ွိတြဲေနတဲ့ အာဂ်င္တိုင္းသူ ေဂ်ာ္ဂ်ီနာ ႏွင့္ လက္ထပ္ေစခ်င္တဲ့ပုံမရပါဘူး။ ဘာလို႔လဲဆို သူမက ေဂ်ာ္ဂ်ီနာကို ႐ိုနယ္ဒိုနဲ႔တြဲ ေနတာဟာ စီပြားေရးအရ တြဲေနတယ္လို႔ယုံၾကည္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။
႐ိုနယ္ဒိုကေတာ့ ေဂ်ာ္ဂ်ီနာႏွင့္တြဲေနတာကိုသေဘာက်ၿပီးေပ်ာ္႐ႊင္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။လက္႐ွိမွာေတာ့ မန္ခ်က္စတာၿမိဳ႕မွာ ႐ိုနယ္ဒိုရဲ႕ သား၃ေယာက္ ေဂ်ာ္ဂ်ီနာႏွင့္ ရထားတဲ့သမီတစ္ဉီး တို႔ႏွင့္ ေပ်ာ္႐ႊင္စရာ မိသားစုေလးအျဖစ္ေနထိုင္ေနၾကတာျဖစ္ပါတယ္။
သတင္းတစ္ပုဒ္အဆိုအရ အမွန္တစ္ကယ္ေတာ့ ေဂ်ာ္ဂ်ီနာက ႐ိုနယ္ဒို ႏွင့္ လက္ထပ္ရန္အတြက္ ရည္႐ြယ္ေနၿပီး ႐ိုနယ္ဒို ထံမွ လက္ထပ္ခြင့္ေတာင္းခံမႈကိုေစာင့္ဆိုင္းေနတာပါ။သို႔ေသာ္ ႐ိုနယ္ဒို ရဲ႕ မိသားစုက ဟန္႔တားေနခဲ့လို႔ လက္ထပ္ဖို႔ ၾကန္႔ၾကေနတာျဖစ္ပါတယ္။
႐ိုနယ္ဒိုရဲ႕ မိခင္ျဖစ္သူ Dolores Aveiro ဟာ သူတို႔အတြဲကိုလက္ထပ္ရန္မလိုလားဘူး၊ ေဂ်ာ္ဂ်ီနာက သူ႕သားရဲ႕ စီးပြားေရးကို မက္ေမာ တယ္လို႔ ႐ိုနယ္ဒိုနဲ႔ နီးစပ္တဲ့ အသိုင္အဝိုင္းက ေျပာပါတယ္ဟု မီဒီယာမ်ားမွာ ေဖာ္ထုတ္ ေရးသား ၾကပါတယ္။ သူမရဲ႕ အျခားသာသမီးေတြ ကလည္း သူမလိုပဲ ထင္ၾကတာပါ။ ဒါေၾကာင့္ မဂၤလာပြဲအတြက္ကေတာ့ ႐ိုနယ္ဒိုရဲ႕မိသားစု အတြင္းမွာ ဆန္႔က်င္ဘက္ အယူအဆေတြ ျပင္းထန္ေန ဆဲပဲျဖစ္ပါတယ္။
သို႔ေသာ္လည္း မၾကာေသးမီက ႐ိုနယ္ဒိုရဲ႕ မိခင္က ေဂ်ာ္ဂ်ီနာကို အေကာင္းျမင္လာၿပီး ႐ိုနယ္ဒို ကို support လုပ္ေပးတဲ့အတြက္ ေဂ်ာ္ဂ်ီနာ ကိုခ်ီးမြမ္းစကားေျပာခဲ့ပါေသးတယ္။ ႐ိုနယ္ဒို ဟာ သူ႕မိခင္ရဲ႕ဆႏၵကို လိုက္ေလ်ာမလား ဆန္႔က်င္မလားဆို တာကေတာ့ အခ်ိန္တန္ရင္ေတာ့သိလာရမွာပါ။
၁၀ စက္ကန့် သာဆွဲရတဲ့ မီလီယံ ဒေါ်လာတန် ပန်းချီကား
တစ်နေ့မှာ ပန်းချီ ဆရာကြီး ပီကာဆို တစ်ယောက် လမ်းလျောက်နေရင်း ပီကာဆို မှန်း သတိပြုမိတဲ့ အမျိုးသမီး တစ်ယောက်က အပြေး အလွှား လာနူတ်ဆက်တယ်။ ကျမဟာ ဆရာကြီး ရဲ့ ပရိတ်သတ် တစ်ယောက်ပါ။ ဆရာကြီး ရဲ့ ပန်းချီတွေကို အရမ်းနှစ်သက်ပါတယ်။ကျမ အတွက် အမှတ်တရ ပန်းချီကား လေး တစ်ချပ် ဆွဲပေးပါလားလို့ တောင်းပန်လိုက်တယ်။ ပီကာဆို က တစ်ချက်ပြုံးလိုက်ပြီး ငါမှာ ပန်းချီး ဆွဲဖို့ ဘာမှ ပါမလာဘူး။ နောက်တစ်နေ့ အခွင့်သင့်မှ ဆွဲပေးမယ်လို့ ပြန်ပြောလိုက်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဟို အမျိုးသမီးက အနားက မခွာပဲ အခုပဲ အဆင်ပြောတာနဲ့ ဆွဲပေးပါ နောက်တစ်ကြိမ်ကြံုဖို့ဆိုတာ ဘယ်တော့မှန်း မသေချာလို့ပါ ဆိုပြီး အတင်းပေကပ်နေတယ်တဲ့..။အဲဒါနဲ့ ပီကာဆို လည်း မနေသာပဲ သူ့ အိပ်ကပ် ထဲက စာရွက်ပိုင်း လေးထဲမှာ ပုံတစ်ပုံဆွဲပေးလိုက်တယ်။ သူဆွဲလိုက်တာ ၁၀ စက္ကန့် လောက်ပဲ ကြာတယ်။ ပြီးတော့ ပီကာဆို က ဒီပုံကို ယူသွား ဒီပုံဟာ မီလီယံ ဒေါ်လာ နဲ့ ချီပြီး တန်တယ်လို့ ပြောလိုက်တယ်။
အမျိုးသမီး လည်း အံသြပြီး မယုံနိုင်အောင် ဖြစ်နေတာပေါ့..။ ၁၀ စက္ကန့်လောက်နဲ့ ဆွဲလိုက်တဲ့ ပန်းချီက ဒေါ်လာ မီလီယံ နဲ့ ချီပြီး တန်တယ်ဖြစ်နိုင်ပါ့ မလားပေါ့။အဲဒါ အိမ်ရောက်တော့လည်း ပီကာဆို က သူ့ကို နောက်လိုက်တယ်ပဲ ထင်နေတယ်။ နောက်တော့ မထူးပါဘူးဆိုပြီး အဲဒီပန်းချီးလေးကိုင်ပြီး ပန်းချီ ပြခန်း တွေမှာ လိုက်မေးတယ်။ သူမ မယုံကြည့်နိုင်လောက် သိလိုက်ရတာက အဲဒီ ၁၀ စက္ကန့် နဲ့ ဆွဲလိုက်တဲ့ ပန်းချီ လေးဟာ ဒေါ်လာ မီလီယံ နဲ့ ချီပြီး တန်နေတယ်တဲ့။အဲဒါနဲ့ သူမဟာ နောက်တစ်ကြိမ် ပီကာဆို ကို မတွေ့တွေ့အောင်ရှာပြီး တွေ့တာနဲ့ ဆရာကြီး ရှင် ဆရာကြီး ပြောလိုက်တဲ့ အတိုင်းပါပဲ.. ဆရာကြီးရဲ့ ပန်းချီ အပိုင်းအစ လေးဟာ ဒေါ်လာ မီလီယံ နဲ့ ချီပြီး တန်နေတယ်။ ပြီးတော့ သူမက ဆက်ပြီး ကျမ ဆရာကြီးရဲ့ တပြည့်ဖြစ်ပါရစေ… ကျမကို ဆရာကြီး လို ဖြစ်အောင် အချိန်တိုတိုအတွင်းမှာ တတ်အောင်သင်ကြားပေးပါ ဆိုပြီး တောင်းဆိုလိုက်တယ်။ပီကာဆို က ခပ်သာသာပြုံးလိုက်ပြီး သမီးငယ် ရေ ဒါမျိုး ၁၀ စက္ကန့် နဲ့ ဒေါ်လာ မီလီယံ နဲ့ ချီပြီး တန်တဲ့ ပန်းချီ ဆွဲတတ်ဖို့ ငါ့ ဘဝ တစ်ခုလုံးရင်းခဲ့ရတယ်။ အခက်အခဲတွေ ပင်ပန်းဆင်းရဲမှုတွေ စိတ်ပျက်မှုပေါင်း များစွာခံပြီးမှ ဒါမျိုးဆွဲတတ်လာတာပါ..။ မင်းရဲ့ ဘဝ တစ်ခုလုံးရင်းပြီး ဒီလို အခက်အခဲတွေ ပင်ပန်းဆင်းရဲမှုတွေ စိတ်ပျက်မှုတွေ ခါးဆီး ခံနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ ငါကလည်း သင်ပေးဖို့ အသင့်ပါလို့ ပြန်ပြောလိုက်တယ်။ပီကာဆို က ၁၀ စက္ကန့် နဲ့ ဒေါ်လာ မီလီယံ နဲ့ ချီပြီး တန်တဲ့ ပန်းချီကား ဆွဲခဲ့တာ အရမ်းလွယ်မယ် ထင်ခဲ့တဲ့ အမျိုးသမီးဟာ ပါးစပ် အဟောင်းသား ဖြစ်နေတာပေါ့..။
လူတော်တော်များများဟာ တခြားသူတစ်ယောက် အောင်မြင် ကြီးပွားနေတာတွေ့ရင် သူတို့လို့ပဲ အောင်မြင် ကြီးပွား ချင်ကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီ့ အောင်မြင်ကြီးပွားသူတွေ ဘယ်လို အခက်အခဲတွေ ပင်ပန်းဆင်းရဲမှုတွေ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရလည်းဆိုတာ သိပ်စိတ်မဝင်စားကြဘူး။ပီကာဆို ရဲ့ ဘဝ ကို လေ့လာကြည့်ရင် သူဟာ အသက် ၉၁ နှစ်မှာ ကွယ်လွန်ခဲ့တယ်။ သူဟာ ပန်းချီကားနဲ့ အနုပညာလက်ရာပေါင်း ၂ သောင်း ၆ ထောင် ကျော် (၂၆၀၇၅ ခု ) ဆွဲခဲ့တယ်လို့ မှတ်တမ်းတွေက ဆိုတယ်။ သူဟာ အသက် ၂၀ အရွယ်မှာ တန်းဝင် ပန်းချီ ဆရာ တစ်ယောက် ဖြစ်တယ် ဆိုပါဆို့ အသက် ၂၀ အရွယ်က နေ အသက် ၉၁ နှစ်အရွယ်ထိ နှစ်ပေါင်း ၇၁ နှစ်အတွင်း ရက်ပေါင်း ၂၅၉၁၅ ရက်နေသွားတယ်။ သူဆွဲခဲ့တဲ့ ပန်းချီပေါင်းက ၂ သောင်း ၆ ထောင်ကျော်ဆိုတော့ တစ်ရက်ကို တန်းဝင် ပန်းချီကား အသစ် တစ်ခုမက ဆွဲခဲ့တယ်လို့ ယေဘုယျ တွက်ကြည့်လို့ရတယ်။စဉ်းစား ကြည့်ရင် အံသြစရာ သူရဲ့ လုပ်အားနှုန်းကိုတွေ့ရတယ်။
အခုခေတ် ပန်းချီ ဆရာတွေဟာ သူ့ရဲ့ ကျော်ကြားမှုနဲ့ သူ့လက်ရာတွေ မှီဖို့ကို မဆိုထားနဲ့ သူ့လို တစ်နေ့ ပန်းချီးကား တစ်ခုပြီးအောင် ဆွဲနိုင်မလား ဆိုတာ မေးစရာ မေးခွန်းရှိတယ်။ ဒီစာကို Stephen King ရဲ့ အဆိုအမိန့်လေးနဲ့ အဆုံးသတ်ချင်ပါတယ်။“Talent is cheaper than table salt. What separates the talented individual from the successful one isalot of hard work. ”“Stephen King”“….ပါရမီ ဆိုတာ စားပွဲပေါ်က ဆားထက် ပေါပါသေးတယ်။ ပါရမီရှင် နဲ့ အောင်မြင်သူ ကို အလုပ်ကြိုးစားမှုတွေကသာ ပိုင်းခြားသွားတာပါတဲ့..”စတီဗင် ကင်း။ဆိုလိုချင်တာက ကျနော်တို့တွေ အရပ်ထဲမှာ ပြောကြတယ်။ သူက သီချင်း ဆိုအရမ်း ကောင်းတယ်။ သီချင်း ဆိုတာ ပါရမီရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီတစ်ယောက်ဟာ အောင်မြင်တဲ့ အဆိုတော် တစ်ယောက် ဖြစ်ချင်မှ ဖြစ်လာတာပါ..။ ဆက်ပြီး အဆိုတော် တစ်ယောက်ဖြစ်အောင် ကြိုးစား အားထုတ်မှသာ အဆိုတော် တစ်ယောက် ဖြစ်လာမှာပါ။ပီကာဆို ဟာ ၁၀ စက္ကန့် သာဆွဲရတဲ့ မီလီယံ ဒေါ်လာတန် ပန်းချီကား ရဖို့ သူ့ဘဝ တစ်ခုလုံး နှစ်ပြီး ကြိုးစားခဲ့ရတာ။ ကမ္ဘာကျော် ပန်းချီ ဆရာကြီး ဖြစ်ဖို့ အခက်အခဲတွေ ပင်ပန်းဆင်းရဲမှုတွေ စိတ်ပျက်မှုပေါင်း များစွာခံပြီး ကြိုးစားခဲ့ရတာ။ဒါကြောင့် ဘဝမှ ဘယ်လို အခက်အခဲတွေကြုံကြံု စိတ်ပျက်ဝမ်းနည်းမှုတွေ ကြံုကြံု ပီကာဆို ရဲ့ အလုပ်ကြိုးစားမှု အကြောင်းလေးကို သတိရပြီး အားတင်းပါ။ ကိုယ်လက်ရှိလုပ်နေတာထက် နှစ်ဆတိုးပြီး ကြိုးစားကြည့် လိုက်ပါအုံး.. ဒါဆိုရင် ကိုယ်ဟာ…ကိုယ်ဖြစ်ချင်တဲ့ ပန်းတိုင်နဲ့ တဖြေးဖြေး နီးလာနေပြီဆိုတာ ကြိမ်းသေနေပြီပေါ့…။ Value of Painting or Hard work ကို ဆီလျှော်အောင် ပြန်ဆိုပါသည်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်က ရိုက်ထားတဲ့ အမှတ်တရ ပုံရိပ်လေးတွေကို ပရိတ်သတ်တွေ အတွက် မျှဝေလာခဲ့တဲ့ စည်ဖြိုးတို့ဇနီးမောင်နှံ
သရုပ်ဆောင် စည်ဖြိုးနဲ့ ခင်လွှမ်းတို့ကတော့ ချစ်သူတွေအဖြစ် အချိန်အကြာကြီး လက်တွဲခဲ့ကြသူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုချိန်မှာတော့ တရားဝင်လက်ထပ်ထားပြီးဇနီးမောင်နှံတွေအဖြစ် ပေါင်း သင်းနေကြပြီး သမီးလေးတစ်ယောက် မွေးဖွားထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။သူတို့နှစ်ဦးဟာကိုယ်ဝန်ရှိသွားတာကြောင့်ချက်ချင်း မင်္ ဂလာဆောင်ခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
မထင်မှတ်တဲ့အခြေအနေတွေကြောင့် ပရိသတ်တွေရဲ့ ဝေဖန်မှုတွေကို များစွာခံခဲ့ကြရသေးတာ ဖြစ်ပါတယ်။အခုမှာတော့ စည်ဖြိုးတို့နှစ်ယောက်လုံး ချစ်ရတဲ့သမီးလေးနဲ့အတူ ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့မိသားစုဘဝလေးကိုဖန်တီးတည် ဆောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်များကလည်းသူတို့ရဲ့မိသားစုလေးကို ကြည့်ပြီးအားကျကြည်နူးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။
မကြာသေးခင်ရက်ပိုင်းကတော့သူတို့နှစ်ဦးရဲ့လူမှုကွန်ယက်မှာဓာတ်ပုံနဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေဝေမျှပေးလာခဲ့ပါတယ်။ဒါက တော့သမီးလေးကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်ကရိုက်ထားတဲ့အမှတ်တရပုံရိပ်လေးတွေကို ပရိသတ်တွေကိုအခုချိန်မှချပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးလည်း ကြည့်ရှုနိုင်စေရန်ဒီသတင်းကိုတင်ဆက်ပေး လိုက်ရပါတယ်နော်။
ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္က ရိုက္ထားတဲ့ အမွတ္တရ ပုံရိပ္ေလးေတြကို ပရိတ္သတ္ေတြ အတြက္ မွ်ေဝလာခဲ့တဲ့ စည္ၿဖိဳးတို႔ဇနီးေမာင္ႏွံ
သ႐ုပ္ေဆာင္ စည္ၿဖိဳးနဲ႕ ခင္လႊမ္းတို႔ကေတာ့ ခ်စ္သူေတြအျဖစ္ အခ်ိန္အၾကာႀကီးလက္တြဲခဲ့ၾကသူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုခ်ိန္မွာေတာ့တရားဝင္ လက္ထပ္ထားၿပီး ဇနီးေမာင္ႏွံေတြအျဖစ္ ေပါင္းသင္းေနၾကၿပီးသမီးေလးတစ္ေယာက္ ေမြးဖြားထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။သူတို႔ႏွစ္ဦးဟာကိုယ္ဝန္ရွိသြားတာေၾကာင့္ ခ်က္ ခ်င္းမဂၤလာေဆာင္ခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။
မထင္မွတ္တဲ့အေျခအေနေတြေၾကာင့္ ပရိသတ္ေတြရဲ႕ ေဝဖန္မႈေတြကို မ်ားစြာခံခဲ့ၾကရေသးတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုမွာေတာ့စည္ၿဖိဳးတို႔ႏွစ္ေယာက္လုံး ခ်စ္ရတဲ့ သမီးေလးနဲ႕အတူ ေပ်ာ္႐ႊင္စရာေကာင္းတဲ့မိသားစုဘဝေလးကိုဖန္တီးတည္ ေဆာက္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။ပရိသတ္မ်ားကလည္းသူတို႔ရဲ႕မိသားစုေလးကို ၾကည့္ၿပီးအားက်ၾကည္ႏူးေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။
မၾကာေသးခင္ရက္ပိုင္းကေတာ့သူတို႔ႏွစ္ဦးရဲ႕လူမႈကြန္ယက္မွာဓာတ္ပုံနဲ႕ဗီဒီယိုေလးေတြေဝမွ်ေပးလာခဲ့ပါတယ္။ဒါက ေတာ့သမီးေလးကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္က ရိုက္ထားတဲ့အမွတ္တရပုံရိပ္ေလးေတြကိုပရိသတ္ေတြကိုအခုခ်ိန္မွခ်ျပလိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။အားလုံးလည္း ၾကည့္ရႈနိုင္ေစရန္ဒီသတင္းကိုတင္ဆက္ေပးလိုက္ ရပါတယ္ေနာ္။